Cristiano Ronaldo Oo Dhaawac Looga Saaray Kulanka Xulkiisa Portugal Iyo Serbia Laba Usbuuc Ka Hor Kulanka Ajax | Warmaalnews.com
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa dhaawac looga saaray kulanka hadda dhex maraya xulalka Serbia iyo Portugal ee isreeb reebka Euro 2020. Dhaawac Cristiano Ronaldo ayaa ku soo beegmaya laba todobaad ka hor marka ay kooxdiisa Juventus la ciyaari doonto Ajax ee kulanka lugta hore ee Champions league.
Xulka qaranka Portugal ayaa daqiiqadii 7 aad gool looga hormaray iyada oo Dusan Tadic uu xulka qarankiisa Serbia u dhaliyay goolka furitaanka laakiin Portugal ayaa ciyaarta ku soo laabtay intii ayna qaybtii hore ee ciyaartu dhamaan waxaana goolka barbaraha u keenay Danilo.
Laakiin dhaawaca Cristiano Ronaldo ku soo gaadhay waajibaadka xulka qarankiisa ee kulanka Serbia ayaa walwal wayn ku abuuray jamaahiirtiisa iyo waliba maamulka kooxdiisa Juventus oo hubka ugu wayn isaga u haysta kulamada Champions League ee Ajax.
Cristiano Ronaldo ayaa markii uu dhaawacani soo gaadhay waxa uu isla markiiba tilmaamay in aanu ciyaarta sii wadan karin taas oo keentay in ciyaarta badal looga saaray.
Cristiano Ronaldo ayaa baacsanayay kubbad loo soo dhiibay laakiin waxaa booday muruqa taas oo keentay in uu xanuun badan dareemay isla markaana uu gacmihiisa ku tilmaamay in ciyaarta laga saaro waxaana booskiisa buuxiyay Pizzi.
Kooxda Juventus ayaa haddaba bilawday walwalka xaalada Cristiano Ronaldo iyada oo April 10 la ciyaari doonta kooxda Ajax ee kulanka lugta kowaad ee siddeed dhamaadka Champions League waana waqtiga uu Ronaldo dagaalka u gali doono haddii uu taam u noqon karo.
Marka uu soo dhamaado kulanka Serbia iyo Portugal hadda dhex maraya oo ilaa hadda oo aan warbixintan qorayno barbaro 1-1 ah ayaa la filayaa in macalinka Portugal la waydiin doono sida ay tahay xaalada Ronaldo balse baadhitaano ayaa xigi doona.
Juventus lafteeda ayaa xaalada si dhaw ula socon doonta iyada oo kadib uu Ronaldo ku laaban doono kooxdiisa Juventus halkaas oo baadhitaan rasmi ah lagu ogaan doono inta uu leeg yahay dhaawac uu Ronaldo u dalbaday in garoonka looga saaro.